Home Wararka Qoyska MW Muse Biixi oo dacwad ku soo oogaya Faysal Cali Waraabe
Qoyska MW Muse Biixi oo dacwad ku soo oogaya Faysal Cali Waraabe
Wararka ka imaanaya magalaada Hargeysa ayaa sheegaya in Gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe ay dacwada ku soo oogayaan qoyska madaxweyne Muuse Biixi , dawacada ayaa la sheegayaa in ay salka ku hayso hadal uu horay u sheegay Faysal oo ahaa in qoyska Muuse Biixi ay wadankii ka dhigteen dukaan ay leeyihiin oo kale.
Waxaa la sheegayaa in Eedaymihii Faysal Cali Waraabe u jeediyey Muuse Biixi iyo qoyskiisa ayaa u dhignaa sidan “Muuse Biixi qoyskiisii, caruurtii uu abtiga u ahaa, walaaladii iyo dadkiisii oo dhana waxay galeen ganacsigii oo wadanka dhaqaalihiisii ayuu gacanta ku haystaa, Waa la cadaynayaa inta mashruuc ee ay qaateen oo waa la hayaa wax qarsoona maaha, ilaa iyo maantana inta qof ee ehelkiisa ah ee uu meel yar xanjo ugu dhajiyey waa la hayaa waanan ka xishoonaynay markii hore laakiin haddii uu isagu xishoon waayey waa lays qaawinayaa waana lays kashifayaa.
Dhinaca kale xogo soo baxaya ayaa sheegaya in hay’addaha sharciga loo gudbiyey cabasho ay qoyska Muuse Biixi ka qabaan gudoomiye Faysal Cali Waraabe. Wargeyska Geeska Afrika oo gudoomiye Faysal wax ka waydiiyey cabashadan laga qabo ayaa waxa uu si kooban u ydhi “Waan Maqlay arintaas oo suuqa ayaan ka maqlay.”
Sidoo kale taliyaha ciidanka dembi baadhista gaashaanle sare Faysal Xiis ayaa ka hadlay dacwadan la sheegay in qoyska Muuse Biixi ka gudbiyey gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Ucid Faysla Cali Waraabe waxaanu si kooban ugu sheegay wargeyska Geeska Afrika “Anigu maan maqal mana ogi waxaas aad sheegayso.”
Waxa kale oo xusid mudan inuu wali xabsiga ku jiro xoghayihii arimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ah ee Ucid Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax.